Ngaba zeziphi iintlobo zezicatshulwa? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ngaba zeziphi iintlobo zezicatshulwa?
Ndikhumbula ndisuka esikolweni ukuba zonke iitekisi zazahlulahlulwa zaba ziintlobo ezi-3, oko kukuthi, inkcazo yesicatshulwa, ukubaliswa kunye nokuqiqa. Ukusuka kwezi ntlobo kunokugqitywa ukuba u-1-chaza, u-2 -landisa, kakuhle, u-3-Isizathu.
KwisiRashiya esityebileyo, iintlobo zentetho zahlulahlulwe:
Zonke ezi ndawo zintathu zahlulahlulwa ngokulula kwenye ngenxa yemicimbi ephawula isicatshulwa, kunye nobukho kwisicatshulwa senani elikhulu leenxalenye ezithile zentetho.
KwisiRashiya, zintathu iindidi zesicatshulwa: ukubaliswa (okuqheleke kakhulu), inkcazo kunye nokuqiqa.
Iitekisi zinokwahlulahlulwa ngokweendidi: i-colloquial, inzululwazi, isemthethweni-shishini, ubugcisa, intatheli.
Zintathu iindidi zetekisi: inkcazo, ukulandisa kunye nokuqiqa. Ukwahlulahlula okunjalo kwenzeka ngokuxhomekeka ekubeni yeyiphi na imisebenzi yombhali wombhalo.
Ukuba umbhali ufuna ukuxela into, ke uhlobo lwesicatshulwa luya kuba ingxelo. Ungakhumbula ibinzana elibonisa xa besithi umbhali ubalisa ibali, oko kukuthi, uxelele. Eli libali. Ujikelezo ufuna ubukho bezenzi, njengoko inyathelo kufuneka lihanjiswe.
Ukuba umsebenzi ubonakalisa iimpawu, iimpawu, ubonise injongo, ukusetyenziswa kwentloko, ke uhlobo lwesicatshulwa luya kuba inkcazo. Inkcazo iqulethe ubuninzi bezichazi, kuba umsebenzi wombhali wovavanyo ukubonisa ngoncedo lwamagama yintoni isihloko
Uhlobo lwesithathu lwesicatshulwa ukuqiqa. Isicatshulwa sengxoxo sakhiwe ngokwenkqubo elandelayo: itesis (isikhundla esifuna ukuqinisekiswa) -ubungqina (imizekelo, iingxoxo) -iziphelo.
Kuyinto enqwenelekayo ukucacisa lo mbuzo; Ungawahlula-hlula izicatshulwa ngokwamaqela amakhulu, kodwa ungenzahlulahlula ngokwala maqela. Umzekelo: ibali, isincoko, i-autobiography - ezi ziindidi zoncwadi. Kwaye isicatshulwa sobugcisa, ishishini, intengiso-ezi ziindidi. Okanye intengiso: ukuthengisa, ukuthengisa, iphepha lokufika - ezi ziindidi zesicatshulwa, kodwa sele siyintengiso.
Iindidi zetekisi zikwezi ndlela zilandelayo:
Ngegama ngokwalo, akukho nzima ukuqagela ukuba kutheni bebizwa njalo, kwaye oku, kunjalo, konke oku malunga nezifundo zesikolo, ezinokukhunjulwa ngokulula nangaphandle komzamo omkhulu, owona mnqweno ungaphakathi ungenamibandela womntu ololo lwazi lubalulekile kuye.
Eyona ndlela ilula ngokucacileyo yinkcazo, kuba kulula kakhulu ukuchaza into efunekayo kunye nayo yonke imicimbi.
Iindidi zetekisi zahlulahlulwe zangqina, zichaza kwaye ziqiqa.
Ukuqhubekeka sisicatshulwa apho ibali lombhali liya khona, ingxelo, isixhobo sivezwe.
Inkcazo yesicatshulwa sisicatshulwa esichaza umntu, into ethile, okanye into. Ubukho bezichazi luphawu.
Ukuqiqa sisicatshulwa ngoncedo apho ukuphuculwa kwengcinga malunga nomsitho okanye into kudluliselwa.
Kulula ukukhumbula ukuba ucinga into oyithethayo.
Ukuba ucinga ukuba uthetha ngento ethile, uveza iingcinga zakho, oko kukuthi, ukubalisa, olu luhlobo lwesibali.
Ukuba ucinga ukuba uchaza into, isicatshulwa eso sichaza uhlobo.
Kwaye udidi lokugqibela lwesicatshulwa lubizwa ngokuba kukuqiqa, oko kukuthi, kungekuphela kokuxela, kodwa kunye nokwenza izigqibo.
Uviwo ngalunye oludlulayo kulwimi lwaseRussia kufuneka luhlukanise iindidi ezintathu zesicatshulwa:
inkcazo -Umyalezo malunga neempawu ezifanayo okanye ezingaphelelwa lixesha zento okanye into ethile. Njengomthetho, umbono oqhelekileyo wento echaziweyo unikiwe, emva koko amanqaku alo abalulekileyo kunye neesekondari anokuboniswa, uvavanyo lokuchaziweyo lunikiwe. Unokuchaza ukuvela komntu, isimilo sakhe, imeko yakhe, imeko abangqongileyo, kunye nokunye.
Inkcazelo -Umyalezo malunga nokusebenza kwesifundo ngokulandelelana okuthile, oko kukuthi, isenzo siyakhula (iyelenqe, ukukhula kwentshukumo, uvuthondaba kunye noxinzelelo).
Ukuqiqa ichaza naziphi na iinyani, izehlo, ngokususela kubudlelwane be-causal. Kwangelo xesha, i-thesis, enye ingxelo, ibekwa kuqala. Oku kulandelayo ziimpikiswano okanye ubungqina bokuxhasa umbono okanye ukungahambisani nawo, kwaye emva koko imizekelo iyanikezelwa kwaye isiphelo sithathwe kokungaphambili.
KwisiRashiya, zonke izicatshulwa zahlulahlulwe zaba ngamaqela amathathu:
Ukubalisa - Kwizicatshulwa ezinje inyani yombuzo ityhilwe - wenza ntoni omnye okanye omnye umntu.
inkcazo-ezo tekisi zichaza into okanye umntu.
Ukuqiqa-kwizicatshulwa ezinje siqiqa ngokuba kutheni isifundo sinjalo.
Imibuzo ye-31 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,381.